ဖြစ်ရပ်မှန် မြန်မာဇာတ်လမ်းတွဲရှည် (ဘယ်အချိန်ပြီးဆုံးမည်ဆိုတာမသိ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဖြစ်ရပ်မှန် မြန်မာဇာတ်လမ်းတွဲရှည် (ဘယ်အချိန်ပြီးဆုံးမည်ဆိုတာမသိ)
ဖြစ်ရပ်မှန် မြန်မာဇာတ်လမ်းတွဲရှည် (ဘယ်အချိန်ပြီးဆုံးမည်ဆိုတာမသိ)
Posted by King on Dec 3, 2012 in Creative Writing, Interviews & Profiles, Members, Myanmar Gazette | 11 comments
ရွာမှာ ဇာတ်လမ်းတွေ ရေးနေကြတာတွေ့တော့ တစ်ခါတစ်လေလည်း ကိုယ်လည်း ရေးချင်မိသား …. ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးမိပေမယ့် သူတို့လောက် စာရေးမကောင်းတော့ ချပြရမှာလည်းရှက် ရေးရမှာလည်း အခက်နဲ့ ကီးဘုတ်ပေါ်က လက်ကလေးတွေကိုတောင် အားနာမိပါရဲ့ …. ရေးမယ်ဆိုတော့ ငါဘာတွေရေးမှာလဲ အကျိုးပြုတွေလား …. စဉ်းစား တွေးချိန်ချင့်စရာတွေလား … ဘ၀အမောတွေ ပြေပျောက်အောင် ဖြေဖျောက်ပေးနိုင့်ပါ့မလားဆိုပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ရင်း မိုးလင်းခဲ့ရတဲ့ ညပေါင်းတွေလည်း မနည်းတော့ပါဘူး (အမှန်က ဘောလုံးပွဲကြည့်ရင်း အာရုဏ်တက်ချိန်ရောက်သည် စာထဲမှာတော့ နည်းနည်း တင်စားတော့ပါဗျာ) ကဲကဲ စကားချည်းတွေက တယ်များပါ့လားဆိုပြီး မေတ္တာပို့နေပါဦးမယ် .. ဇာတ်လမ်းလေးကို မကြာခင် စပါတော့မယ် … ဇာတ်လမ်းလို့သာ ပြောရတယ် … သိုင်းဝိုင်းပြီးရေးထားတော့ မရှိဘူးနော် … ဒါက ကြိုတင် စကားပလ္လင်ခံထားတာ … ဇာတ်လမ်းလေးက ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးဆိုတော့ တိုတို တုတ်တုတ်နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ ရေးထားတယ်နော် … ကဲ ဇာတ်လမ်းအစက ဒီလိုဗျ ………
ကျွန်တော် အရင်တုန်းက ပိုက်ဆံလေး လေး ငါးရာ ရဖို့အတွက်
နေပူထဲမှာ သူများခိုင်းသမျှ လုပ်ပေးခဲ့ရတယ် …..
အခုတော့ ပိုက်ဆံ လေး ငါးရာ ပေးပြီး
သူများကို နေပူထဲ ခိုင်းတတ်နေပါပြီ ……
ကျွန်တော် သောင်းဂဏန်း ပိုက်ဆံတွေကို သူများဆီက မုန့်ဖိုးရဖူးခဲ့ပါပြီ
ကျွန်တော် ဘယ်တော့ သူများကို သောင်းဂဏန်း ပြန်ပေးနိုင်မယ့်အချိန် ……………..
စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ကြည့်ရင် ရုပ်ရှင်တွေတောင် လိုက်လို့မမီပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို မိမိကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးများနဲ့ ပုံဖော်ကြည့်ရှုပေးပါရန်။ မီတာလည်း သက်သာတယ်။ မျက်လုံးလည်းမညောင်းတော့ဘူးဟုတ်။ (အမှန်ကကိုယ့်ဖာသာရေးရင် ကောင်းချင်မှ ကောင်းမှာလေ အဲဒီတော့ ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ် ပုံဖော်ကြည့်ခိုင်းတော့ မကောင်းဘူးလို့ မပြောကြဘူးထင်လို့ )
ပုံလေးကတော့ အရက်သမား ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ကနေ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ http://www.facebook.com/pages/%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%82%E1%81%A2%E1%80%A1%E1%80%96%E1%80%B2%E1%80%BC%E1%82%95%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9/125662110843334
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူတာများမယ် ထင်ပါရဲ့ 
အကျယ်ဖြန့်ပြီး တွေးရမှာပေါ့နော် ..
ဘီယာရယ်၊ ဝီစကီရယ် ဆိုတဲ့ ပုံလေးကို သဘောကျတယ်ဗျာ …
လင့် ပဲ မြင်ရတယ်
ပုံလေးကတော့ လိုင်းကောင်းရင် မြင်ရပါလိမ့်မယ်
ပုံလေးက စာလေးတွေပဲ ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်
ဘ၀မှာ ဘ ဆိုတဲ့ ဘီယာရယ် ၀ ဆိုတဲ့ ၀ီစကီရယ် နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့
ဘီယာလိုပဲ များများဝင်မှ အရာထင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိသလို နည်းနည်းလောက်သောက်ရုံနဲ့ အစွမ်းပြတဲ့ ၀ီစကီလို အရာမျိုးတွေလည်း ရှိတယ်တဲ့ ….
ဒီလို ကိုကင်းရဲ့ ..
အဲဒီ မစ္စတာ မာဃ ဆိုတဲ့ လူကြီးပေါ့ဗျာ ..
သူ့ကိုယ်သူ နတ်ပြည်မှာ နေတာလေး .. ဘာလေးနဲ့ ..
ဟော .. အခုတော့ တွေ့တယ် မဟုတ်လား ..
ကိုးနတ်ရှင် ဖွတ်ချပ်ဖွတ်ချပ် ဖြစ်နေတဲ့ အရပ်မှာရယ် … အဟိ ..
ဒီ ခြောက်မျက်နှာ ကတော့
သိကြားမင်း အမျက်ထွက်တာ မကြုံဖူးသေးဘူး ထင်ပါ့
နတ်ပြည်က ကိုးနတ်ရှင်က နင်တို့ထက်သာတယ်
ဦးမာဃ နည်းနည်း မျက်စိလျှမ်းသွားလို့ ဟင်းးးးနော်
အပေါ်က စာလေးနဲ့ ဟာ မဟုတ်လား
ဦးမာဃက အဲဒါကို ပုံလို့ မထင်မိလို့
ကျုပ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ ဘ၀ ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျ။
“ဘ” ဆိုတဲ့ဘိန်းကို “၀” ၀၀လင်လင်သာရှုရမယ်ဆိုရင် တစ်လောကလုံးကိုမေ့ပြီး ပျော်ပျော်နေမယ်တဲ့ . . .
သြော် ……..ကိုကင်း …..ကိုကင်း ……
သူ့ဟာ ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်သား …. ကြိုက်သလောက် တွေးလို့ရသကိုး…….
တအားတိုနေတော့ ခံစားရတာ စန့် တငင်ငင်ကြီးဖြစ်နေတယ်…..
ဘ၀ ဘ၀ နှစ်လုံးထဲရှိလိုသာပဲနော်… သုံးလုံးသာဆိုရင်….. ဟင်း……………..